သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မြှင့်တင်ရေးအတွက်လင့်ခ်များအသုံးပြုနည်းနှင့် ပတ်သက်၍ Semalt အကြံပေးချက်
On-Page SEO ဆိုသည်မှာအာရုံစိုက်ပါ
ကြာရှည်သော့ချက်စာလုံးများကို ဦး တည်သည်
Email Marketing ကိုမမေ့ပါနှင့်
Blog ည့်သည် Blogging နှင့်သင်၏ဆိုက်တွင် Others ည့်သည်တင်ရန်အခြားသူများအားဖိတ်ကြားခြင်း
စျေးဝယ်သူတစ်ယောက်အနေနှင့်၊ အွန်လိုင်းစတိုးပိုင်ရှင်၊ SEO မန်နေဂျာ၊ ဘလော့ဂါ (သို့) အွန်လိုင်းမြင်ကွင်းနှင့်ပတ်သက်သောအခြားမည်သည့်အခန်းကဏ္ player မှပါ ၀ င်သည်။ သင်၏စိတ်ထက်သန်ဆုံးအတွေးများထဲမှတစ်ခုသည်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်များသို့ပိုမိုအသွားအလာကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်မည်ဆိုသည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ ရှာဖွေမှုရလဒ်စာမျက်နှာများတွင်အဆင့်မြင့်ခြင်း၊ ကြီးမားသောလမ်းကြောင်းများရရှိခြင်းနှင့်မြင်သာထင်သာအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်၏ဆန္ဒစာရင်းတွင်ပထမဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ link များကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်သင်အမြဲလိုချင်သောမကြုံစဖူးအသွားအလာတိုးပွားစေခြင်းဖြင့်စမ်းသပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်း ၁၉ ခုကိုယူဆောင်လာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကြီးမားသောအသွားအလာများရရှိရန်လမ်းသည်အထီးကျန်။ စိတ်ပျက်စရာကောင်းပုံရသော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီဟာကဘယ်လိုလဲ
I. On-Page SEO ဆိုသည်ကိုဂရုပြုပါ
SEO ဆိုတာသေပြီလို့မင်းထင်လား။ မဟုတ်ပါ။ သင်ရုံကမှန်ကန်တဲ့လမ်းလုပ်နေခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ သင်၏အကြောင်းအရာများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များဆီသို့ ဦး တည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်အသုံးပြုသူများကိုသင်ကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည်။ ဒါပေမယ့် algorithms အတွက်ရေးရုံသာမကသင့် user တွေအတွက်တကယ်ရေးပါ။ သင့်ရဲ့ content တွေကိုသဘာဝနှင့်လည်းအဖိုးတန်ပုံရသည်။
နောက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။ သင်သည်ရုပ်ပုံလွှာ၊ စာသား၊ နောက်ကျောချိတ်ဆက်မှုများ၊ အတွင်းချိတ်ဆက်မှုများ၊ metadata များ၊ ရလဒ်ကိုကြည့်ရှုရန် SEO သည်အသက်အရွယ်မရှည်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါကအချိန်အနည်းငယ်ကြာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အကယ်၍ သင်ကမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်၊ သင့်ရဲ့အော်ဂဲနစ်အသွားအလာကိုတိုးတက်မှုအချို့ကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။ သင်ထိုသို့မပြုလုပ်ပါကသင်၏ on-SEO SEO အတွက်အကောင်းဆုံးအာရုံစိုက်မှုမရှိပါ။
၂ ။ ကြာရှည်သော့ချက်စာလုံးများကို ဦး တည်သည်
ငါတို့အားလုံးသည်အမြီးရှည်သောသော့ချက်စာလုံးများအကြောင်းဆက်ပြောနေသော်လည်းသင်အမှန်တကယ်၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုနေသလား။ အမြီးရှည်သော့ချက်စာလုံးများ၊ အထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်မြင့်သောစကားလုံးများသည်တကယ့် hotcake ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်သိသာသောအသွားအလာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သော visitors ည့်သည်များပါ ၀ င်သောအသွားအလာမျိုးဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ အမြီးရှည်သောသော့ချက်စာလုံးများသည်ကြီးမားသောလမ်းကြောင်းကိုမရောက်စေပါ။ သို့သော်၎င်းတို့သည်မှန်ကန်သောအသွားအလာ၊ သစ္စာရှိဖောက်သည်များသို့မဟုတ်သင်၏ပုံမှန်ပရိသတ်ဖြစ်လာနိုင်သောအသွားအလာကိုဆောင်ကြဉ်းပေးပါသည်။
ထို့ကြောင့်သင်သည်အမြီးရှည်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုစတင်ပစ်မှတ်မရသေးလျှင်ယခုစတင်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ပြီးတော့မင်းဘာသိလဲ long-tail သော့ချက်စာလုံးများသည်လစဉ်ဝက်ဘ်ရှာဖွေမှု၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုဖော်ပြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းတို့ကိုသင်၏ပေးဆောင်ထားသောသို့မဟုတ်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုအတွက်သူတို့ကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းမပြုပါကသင်ပျောက်ဆုံးနေသည်ကိုဆိုလိုသည်။
၃ ။ မတွန်းလှန်နိုင်သောခေါင်းကြီးပိုင်းကိုရေးပါ
နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအလှဆင်ထားသောအစားအစာတစ်ခုကိုတွေ့သောအခါ၌သင်မည်သို့ပန်ကရိယစတင်မည်ကိုသင်သိပါသလား။ ဟုတ်တယ်၊ မတွန်းလှန်နိုင်တဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေအလုပ်အတူတူပဲ။ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာဟာဘယ်လောက်ကြီးကျယ်ပြီးပြည့်စုံမှုရှိပါစေ၊ လူတွေကိုအဲဒါကိုဆက်မဖတ်ခင်ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။ ကောင်းပြီ, သင်၏ခေါင်းစဉ်ကြောင်းသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်များသည်သင်၏အကြောင်းအရာ၏အရေးအပါဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏အကြောင်းအရာသည်သူတို့မပါဘဲမဖတ်ရသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်စာဖတ်သူတွေကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေစိတ် ၀ င်စားစေမယ့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားပါ။ ကလစ်နှိပ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်သတိရပါ၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏တုန်ခါမှုနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ပေးမည့်သေချာသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? လူများသည် clickbait ခေါင်းစီးများကိုမုန်း။ ခေါင်းစဉ်သည်ငါးမျှားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသိလိုက်သည်နှင့်ချက်ချင်းသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှထွက်သွားလိမ့်မည်။
IV ။ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြည်တွင်းမှာချိတ်ဆက်ပါ
ဟုတ်ကဲ့၊ သင့်ကိုပြန်ပြတဲ့မြင့်မားတဲ့အာဏာပိုင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွေကနေ backlink တွေကတကယ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မတူကွဲပြားတဲ့အရေးကြီးတာတွေ၊ မကြာခဏမေ့သွားတာတွေကိုသင်သိပါသလား။ အကြောင်းအရာကိုပြည်တွင်းမှာချိတ်ဆက်ထားတယ်။ ဘလော့ဂါများနှင့် SEO မန်နေဂျာအများစုသည်အချိန်ကုန်ခံပြီးမြင့်မားသောအာဏာပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအပြန်အလှန်လင့်ခ်များကိုလိုက်လံရှာဖွေလေ့ရှိပြီး၎င်းတို့သည်အတွင်းပိုင်းလင့်ခ်များကိုအသုံးပြုရန်မေ့နေကြသည်။
အများအားဖြင့်မသိသောအရာသည်သင်၏ချိတ်ဆက်မှုဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်သင်၏အချိတ်အဆက်ပရိုဖိုင်း၏ခွန်အားကိုလည်းထိခိုက်နိုင်သည်။ ဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲ သင်၏အတွင်းပိုင်းအကြောင်းအရာကိုအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးပမ်းပါ။ အထူးသဖြင့်သင့်အားနိမ့်သောဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းအရာကိုကြီးမားသောအသွားအလာများလာနေသောသင်၏အကြောင်းအရာနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ဝဘ်ဆိုဒ်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုအသွားအလာအားလုံးဖန်တီးရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အချင်းချင်းဆက်စပ်မှုတွေကိုသာချိတ်ဆက်ဖို့သတိရပါ။
ပြည်တွင်းဆက်သွယ်မှုကဲ့သို့ပင်လူအများစုသည်အသွားအလာကိုကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်ရန်အာရုံစိုက်ကြပြီးအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့သောအဟောင်းကျောင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းများကိုမေ့သွားကြသည်။ သူတို့မသိတာကအီးမေးလ်စျေးကွက်ဟာမနက်ဖြန်အထိဆက်ပြီးသက်ဆိုင်နေ ဦး မှာပဲ။ အီးမေးလ်များမှတစ်ဆင့်ခိုင်မာသောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်လျှင်သင်၏ traffic ကိုမည်မျှတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင်အရာအားလုံးကိုအတန်အသင့်လုပ်ဖို့သတိရပါ။ လူတွေဟာဆီလျှော်တဲ့အီးမေးလ်အမြောက်အများကိုလက်ခံရတာမကြိုက်ကြဘူး။ ထို့ကြောင့်သင်၏အီးမေးလ်များကိုသင်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်နှင့်လိုက်ဖက်ပြီးသူတို့မခံရပ်နိုင်သောကမ်းလှမ်းချက်များကိုပေးပို့ပါ။ များမကြာမီသင်သည်သင်၏စီးပွားရေးတိုးတက်နေသည်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။
၆ ။ လူမှုရေးကိုရယူပါ
အကြောင်းအရာကောင်းများထုတ်လုပ်ရန်မလုံလောက်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ လူတွေကိုမြင်စေချင်တယ် လူတွေကိုသူတို့ကိုမြင်စေတဲ့နည်းတစ်နည်းကသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာတက်ကြွစွာတင်ပို့ခြင်းဖြစ်တယ်။ သင်၏ပရိသတ်ကိုသင်၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်များမှတဆင့်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်သင်စတင်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်များတည်ဆောက်ပြီးနောက်များစွာသောနောက်လိုက်များရရှိပြီးနောက်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်စတင်နိုင်သည်။ သင်၏ site သို့အသွားအလာဆွဲရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာသင်၏တိုက်ရိုက်နောက်လိုက်များသည်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုဖတ်ရှုရမည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်အကြောင်းအရာများကိုသူတို့၏နောက်လိုက်များနှင့်မျှဝေနိုင်ပြီးသင်၏အကြောင်းအရာကိုကျယ်ပြန့်စေသည်။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုလူမှုမီဒီယာပေါ်တွင်တင်ရုံသာမကလူများကိုပါ ၀ င်စေရန်အွန်လိုင်းတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏နောက်လိုက်များ၏ရေးသားချက်များကဲ့သို့ပင်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုပြန်လည်ဖြေကြားပါ၊ hashtags နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်ဆီသို့ပေးပို့သောမေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းများကိုအမြဲတစေပြန်လည်ဖြေကြားရန်အမြဲသတိရပါ။ သင်၏ပရိသတ်ကိုသင်နေရန်ရှိနေကြောင်းပြပါ။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်သစ္စာရှိအောင်သင်လုပ်နိုင်သည်။
၇ ။ Blog ည့်သည် Blogging နှင့်သင်၏ဆိုက်တွင် Others ည့်သည်တင်ရန်အခြားသူများအားဖိတ်ကြားခြင်း
တချို့ကစစ်မှန်တဲ့ guest ည့်သည်ဘလော့ဂ်လုပ်တာဟာသေပြီလို့ပြောကြတယ်။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များပေါ်တွင်ည့်သည်တင်ခြင်း (စစ်မှန်သော guest ည့်သည်တင်ခြင်း) သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာကိုများစွာတိုးစေပြီးသင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ပြdaysနာမှာ days ည့်သည်များသည်ဤနေ့ရက်များကိုတင်ခြင်းသည်မမှန်ပါ။ လူများသည်၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်စျေးပေါသောလှည့်ကွက်များကိုအသုံးပြုကြသော်လည်းအဘယ်အရာကိုခန့်မှန်းကြသနည်း။ ဂူးဂဲလ်မှာသူတို့ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအပြစ်ပေးဖို့နည်းလမ်းရှိတယ်။ သင်၏ time ည့်သည်များအားဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်ဆိုက်တစ်ခုဖြင့် web ည့်သည်များတင်ခြင်းနှင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်များကိုထို guest ည့်သည်ပို့စ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်သင်၏အချိန်၊ အတွေးများနှင့်အားထုတ်မှုများကိုအမှန်တကယ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါကသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အသွားအလာကိုမြှင့်တင်ပြီးသင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုလူသိရှင်ကြားဖြစ်စေမည်။
အခြားမြင့်မားသောအခွင့်အာဏာရှိသောဂုဏ်သိက္ခာရှိသောဆိုဒ်များကို guest ည့်သည်များတင်သည့်နည်းတူသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်းအခြားသူများကို post ည့်သည်များတင်ရန်အားပေးသင့်သည်။ သူတို့ရဲ့ပရိသတ်ကသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုဖတ်ရလိမ့်မယ်၊ မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲသိလား traffic တိုး! သတိပေးခံရ ဂူဂဲလ်က၎င်းကိုအပြစ်ပေးသောကြောင့်အရည်အသွေးနိမ့်ကျသည်၊ သင်၏ဝဘ်ဆိုက်၏အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သော posts ည့်သည်များကိုသာခွင့်ပြုပါ။
၈ ။ ဗွီဒီယိုကိုသင်၏အကြောင်းအရာဗျူဟာသို့ထည့်ပါ
စာသားအခြေပြုအကြောင်းအရာသည်အင်တာနက်၏အမြဲတမ်းဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းဗီဒီယိုအခြေခံအကြောင်းအရာများသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အဖိုးတန်ကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ ငါ့ကိုမယုံဘူးလား YouTube, Tiktok, Vimeo နှင့်အခြားအရာများကိုကြည့်ပါ။ သူတို့အားလုံးပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ဘယ်လောက်ပဲစည်ကားနေပါစေစာသားကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပါစေ၊ ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကိုစမ်းကြည့်ပါ။
ဗွီဒီယိုပါဝင်မှုသည်သင် you ည့်သည်အသစ်များကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်သင်ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပြုလုပ်နေစဉ်ပုံမှန်များကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။ လတ်တလောကိန်းဂဏန်းများအရလူများသည်စာသားအကြောင်းအရာများထက်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်သာမကဗီဒီယိုသည်သတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုများစွာတိုးမြှင့်စေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်ဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုစတင်ရန်မဖြစ်သေးလျှင်ယခုပြုလုပ်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
IX ။ သင်၏ဆိုဒ်သည်တုန့်ပြန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ
Desktop များသည်အင်တာနက်ကိုသုံးရန်တစ်ခုတည်းသောသွားသည့်အချိန်များဖြစ်သည်။ အခုဆိုရင်လူအများအပြားကကွန်ပြူတာတွေထက်မိုဘိုင်းဖုန်းကတဆင့် ၀ က်ဘ်ကိုသုံးနေကြတယ်။ အဘယ်ကြောင့်? လက်ကိုင်ဖုန်းတွေဟာအမြဲတမ်းအဆင်ပြေတယ်။ လူအများစုကသူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကတဆင့်အင်တာနက်ကိုသုံးနေကြတယ်ဆိုတော့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေအပေါ်တုံ့ပြန်မှုမရှိတဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုရှိလို့မရဘူး။ ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည်အချိန်ဖြုန်းရန်အချိန်သိပ်မရှိကြပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသည် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဖွင့်ရန်အချိန်များစွာယူနေသည်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုသွားရန်ကြိုးစားနေသဖြင့်ထိုစာမျက်နှာများကိုအမြန်ထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသတိပြုမိကြသည်။
ပြီးတော့အဲဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲသိလား သင်၏တုံပြန်မှုနှုန်းသည်မြင့်တက်လာပြီးနောက်ဆုံးတွင်ဂူးဂဲလ်သည်သင့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမကြိုက်ဖွယ်ရှိသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာဂူဂဲလ် algorithms များကလူအများစုကသူတို့ရှာသောတန်ဖိုးကိုမပေးနိုင်လျှင်စာမျက်နှာတစ်ခုမှသာထွက်သွားသည်ဟုယူဆကြသည်။
မတူကွဲပြားသောကိရိယာများမှတစ်ဆင့်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုတုန့်ပြန်မှုရှိစေရန်ကြိုးပမ်းပါ။ ထို့အပြင်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ရှုထောင့်အားလုံးကိုအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းပညာပိုင်းအရအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်သေချာစေပါ။
အင်တာနက်ပေါ်မှအကောင်းဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသိပါသလား။ ၄ င်းတို့သည်လစဉ်အများဆုံးအမြင့်မားဆုံးသောယာဉ်များမဟုတ်ပါ။ အဲဒီအစားသူတို့ကအများဆုံးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပရိသတ်ကိုဖြစ်ကြသည်။ ပါ ၀ င်တဲ့ပရိသတ်တွေဟာသစ္စာစောင့်သိတယ်၊ သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုအခြားသူများနှင့်လည်းမျှဝေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူအသစ်များကိုရံဖန်ရံခါဆွဲဆောင်လေ့ရှိသည်။ လူတိုင်းလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလား။ ခိုင်မာသောသစ္စာရှိသည့်အသိုင်းအဝိုင်းရှိရန်။
ကောင်းပြီ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ပရိသတ်ဟာကောင်းကင်ကကျတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်တည်ဆောက်နေကြသည်။ သင်၏ visitors ည့်သည်များ/ပရိသတ်နှင့်အတူခိုင်မာသောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ posts ည့်သည်များကိုသင်၏ရေးသားချက်များအပေါ်မှတ်ချက်များပေးရန်ဖိအားပေးသောအကြောင်းအရာများကိုတင်ရန်ကြိုးစားပါ။ သင်၏ on ည့်သည်များသည်သင်၏ site ပေါ်တွင်မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်မေးခွန်းများကိုချန်ထားပါကသူတို့ကိုပြန်ပြောပါ။ သူတို့အားပြန်ကြားချက်များမှတဆင့်ပြောဆိုမှုများတည်ဆောက်။ လူတိုင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန်နှင့်စကားပြောဆိုမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လုံလောက်သောလုံခြုံမှုရှိစေရန်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းကိုသင့်တော်စွာစီမံရန်မမေ့ပါနှင့်။
သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုမြှင့်တင်ရန်၊ ကြီးမားသောအသွားအလာရရှိရန်နှင့်အံ့သြဖွယ်အရောင်းလုပ်ရန်သင့်အတွက်အကြံဥာဏ် ၁၀ ချက်ရှိသည်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်မှော်ဆန်သောပုံသေနည်းမရှိချေ။ ၎င်းသည်အချိန်နှင့်အားစိုက်ထုတ်ရန်လိုသည်၊ သို့သော်သင်၏အကောင်းဆုံးကိုကြိုးစားလျှင်ရလဒ်များကိုရရှိလိမ့်မည်။ ကြောင်း kinda စိတ်ဖိစီးမှုအသံလျှင်, Semalt သင်ဖုံးလွှမ်းတယ် သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပြောင်းလဲရန်ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ အတွေ့အကြုံများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတများရှိသည်။ အချိန်တိုအတွင်းအပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။